Amazon Echo Dot Review - Rule News
Lix Best Guddoomiye ku Wi-Fi	Amazon Echo Dot Review
Dhibcaha guud5	Echo Dot waa wax kasta oo weyn oo ku saabsan gudoomiyaha weyn Echo aruurshey galay puck yar oo kharash ka mid ah saddex-meelood meel ka mid ah qiimaha.	qalab yaryar keentaa gacanta cod in qalab ku dhowaad wixii smart ee guriga, halka ciyaaro music, ka jawaabidda su'aalaha iyo kuu sheegaysa cimilada
Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “dib u eegis Amazon Echo Dot: sida ugu fiican ee Echo ee saddex-meelood meel ka mid ah qiimaha” waxaa qoray Samuel Gibbs, waayo theguardian.com on Monday 28 November 2016 07.00 UTC
The Amazon Echo Dot waa muhiimad dhan googooyo ah Amazon Echo in aad u xiiso badan, laakiin aan Afayeenka waxa ay dureeri - iyo si ay kukacayaan kaliya hal-saddexaad ee qiimaha.
Dot waa mid ka mid ah saddex waxyaabaha Alexa-karti ka Amazon in dhigeysa caawiyaha cod shirkadda ee hore iyo dhexe. Kaliya labo, Echo Dot iyo Echo ayaa laga heli karaa UK: saddexaad, Afayeenka qaadi karo Bluetooth yeedhay Amazon Tubada, waa helaa oo keliya Maraykanka.
The cable microUSB iyo 3.5mm audio fur cable galay dhabarka. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Dot waa puck yar oo madow ama caddaan kaatunka ah nalalka ugu sareysa, afar badhamada iyo soo diyaariyeen toddoba-makarafoon - nidaam la mid ah ka dhigaya Gudoomiyaha Echo si wanaagsan at aad maqalka ka badan meel kasta.
Waxaa maqlaa baxay for a "erayga dib", taasoo by default waa magaca kaaliyaha codka ku jira gudahood Dot ah: "Alexa". Dheh erey ka dib iyo kaaliyaha codka yimaado inuu soo nooleeyo wixii ka jawaab su'aalaha, qaataan amarradiisa oo uu ku sameeyo ficilada.
Dot wuxuu leeyahay Guddoomiyaha ka dhisay-in yar, waxa wanaagsan oo ku filan ay helaan dhammaan jawaabaha codka Alexa tufo, alaarmiga iyo qaylodhaan kale, laakiin waxaa dhab ahaan aan loogu talagalay in lagu ciyaaro music, soo saara dhawaaqa tinny.
Halkii dambe ee Dot leeyahay dekedda audio-out ah, oo waxaa loogu talagalay fur galay aad ku hadla ee hadda jira. Haddii kale, waxay xubnuhu kartaa in Guddoomiyaha a wireless via Bluetooth.
Maxay u eg?
Dot cad weli hogaanka madow, laakiin ma ay design fudud ha fiirin baxeen meeshii on golaha sariirta dhinaceeda ama afhayeenka. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Dot waa yaab digtoonaadaan on countertop fadhiya ama derbiga ku xayiran. Waxaa jira giraan ah qoqobada iftiin ku wareegsan sareysa in muujinaysaa marka la firfircoona uga dhegaysanaya waxay adiga iyo jirsado cas markii aad ku dhuftey button carrabka la'aa, koronto goynta mics ah, si aad u ogaato marka ay tahay iyo waxa aan la dhegaysigooda.
Dot cad ayaa hogaanka a cawl, taas oo macnaheedu yahay waxa ka badan waxa laga yaabaa miis sariirta dhinaceeda cad u taagan soo baxay, tusaale ahaan. Waxaad ka heli kartaa jaakadaha yar salka ku maqaar ama dhar haddii caag dhaldhalaalaan uusan arrin iska jar oo aad Qurxinta.
Riix badhanka ah dusheeda si loo xakameeyo mugga ka dhisay-in Gudoomiyaha ama wax soo saarka si aad ku hadla xiran. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Echo Dot The samayn kartaa wax kasta oo Alexa samayn karaa. ilaa set waa la mid ah sida Echo ah: waxaa furaysto ee, furo app Alexa ka on your smartphone iyo raac tilmaamaha si ay u xirmaan aad network Wi-Fi.
Marka ilaa iyo ordaya, Alexa samayn kartaa noocyo kala duwan oo aad muuqaalada ku xigeenka caadiga ah. Waxaa dhigay doonaa shidda, kuu sheegi wakhtiga, alaarmiga set, kuu sheegi waxa aad maalin u eg ka kalandarka xiran, kuu sheegi ku saabsan ka dhimo ama cimilada oo ka jawaabaan su'aalo ku saabsan cayn kasta oo wax.
Alexa uu heli karo macluumaad badan oo ilaa xad, laakiin mugga sheer xogta Google ayaa ugu faraha ay, taas oo macnaheedu yahay Alexa ku dhibtoon doonto su'aalaha qaarkood marka a cod raadinta Google ma laga yaabaa.
Farqiga weyn waa in Alexa jawaabay hab lama filaan ah aadanaha, oo had iyo jeer fahmi karaa waxa aad ayaa sheegay in xataa haddii aanay ka jawaabi karin su'aal ah, taas oo macnaheedu yahay waa in si fiican muddo aad u hesho macluumaad dheeraad ah waxaa shoveled galay sirdoonka backend macmal ah.
Alexa uu leeyahay xirfado loogu yeero in lagu dari karaa iyadii. Waxyaalahaas app-sida siiyo awoodaha cusub. Badan shirkadaha iyo adeegyada ay leeyihiin xirfadaha. xirfad The Guardian-ka waxaad ka akhrisan doona wararka, headlines ama dib u eegista, tusaale ahaan. The xirfad Rail Qaranka ayaa kuu sheegi doona wixii ka dhimo tareenka aad u eg. xirfad Allrecipies wuxuu awood u leeyahay waxaad ka akhrisan mid ka mid ah noqon doona 60,000 cuntada kala duwan.
Laakiin laga yaabee set ugu fiican ee xirfadaha diyaar u Dot Echo waa kontaroolada guriga smart. Halkan waa meesha Dot wuxuu u iftiimaa: waxa uu leeyahay tiro balaadhan oo ah taageero qalabka smart xiran, ka hadla oo gacanta ku fog, in ay nalalka, mashiinka qaxwaha ama wax ku xiran a Samsung SmartThings xarun.
Alexa, shid nalalka ee qolka fadhiga
Iftiinka cas on badhanka iyo giraanta iftiin show carrabka la'aa markii Alexa aad ma maqli karaysaane dambe marka aad rabto in aad wax yar gaarka ah. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Out of sanduuqa ay u shaqayso la Philips cado, halka xirfadaha jira Nest, rugta, Honeywell, Tado, LightwaveRF iyo LIFX, la Sonos ugu dhaqsaha badan la filayo.
Marka kor u khali idinku amrayo karaa oo kaliya wax. Waxaad in la xasuusto magaca wax ka tahay inaad isku deyeyso inaad amarka, laakiin gudaha app Alexa aad wax group in oo ku off iyadoo mid ka mid ah amarka u noqon kara.
Si ka duwan inta badan nidaamyada kale ee guriga smart, item hal waxaa lagu qori karaa kooxo badan oo la micno ah iftiin jiifka ah ayaa laga yaabaa in kooxda "jiifka" iyo sidoo kale in kooxda "dabaqa sare" oo laga yaabo in a "guriga" group, si aad u soo jeedin karaa oo kaliya nalalka jiifka ah oo ku saabsan, oo dhan ee dabaqa sare ama dami guriga oo dhan marka aad ku dul baxay albaabka.
Waxa kale oo aad sameyn kartaa Nuurkii, midabka, goobta ama wax kale nalalka taageeradaada, laakiin nalalka waa uun bilowga. Ku dhawaad ​​kasta oo qalabka guriga smart la xakameyn karaa via cod la xidhiidha saxda ah.
Waxaad samayn kartaa heerkulka via a Nest, dhigay qaxwaha socday via smartplug a, beddelaan TV oo ku saabsan ama off, dhigay channel ama samayn wax badan qalabka ku xiran xarun SmartThings a.
Echo Dot ma laha in la isticmaalo in go'doomin midkood. Haddii aad tahay in sawaxan dheer laba dhibco ama qalab kale Echo, oo keliya mid ka mid dhow jawaabi doonaa in amarrada aad. Amazon xataa wayna iibisaa in baakad: iibsan shan heli a free lixaad, ama iibsadaan 10 oo aad hesho laba free. Waxaa cad waxaa aad doonayo inuu kulligood dibadda u saaray gurigaaga ka badan.
Halkan ayaan isticmaali shareeraysaa dhinaca danbe ee ka Dot iyo jiheeye dhagta si ku meel gaar ah u korto derbigii. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Waxaa la yaab leh ka shaqeeya iyo sidoo kale marka Jaha derbiga ku, laakiin waa inaad u soo jiid off suufka caag ah ama aad ka dhigi qaybta u gaar ah
xayeysiis Alexa on TV oo iyaga ka dhigay off
Mararka qaarkood idaacada off iyagii wuxuu dhex qotomiyey doonaa
Marka aad heysato waxa ay kor u khali ku hadla Dot kaliya ee wax soo saarka ay audio doono iyada oo ku hadla kuwa, si ay u baahan yihiin in la hartay waqtiga oo dhan si aad u awood in ay ku hadlaan in aad xitaa haddii aadan ciyaaro music
IFTTT iyo taageero Harmony Logitech waxaa ugu dhaqsaha badan soo socda, taas oo si weyn u soo fidin doonaa taageero guriga smart Alexa ee
Waa in aad u malaynayso in si taxadar leh oo ku saabsan waxa aad ku socoto in ay soo wac kasta oo ka mid ah qalabka ku xiran sababta oo ah waxaad u baahan doontaa in la yidhaahdo magacyadooda si Alexa si ay u shaqeysiin shakhsiga ku saleysan
The Amazon Echo Dot kharash £ 50 ka mid madow ama caddaan. The weyn Echo kharash £ 150.
Echo Dot waa wax kasta oo weyn ku saabsan gudoomiyaha weyn Echo aruurshey galay puck yar oo kharash ka mid ah saddex-meelood meel ka mid ah qiimaha.
In ay awoodaan in ay codkooda wax gacanta oo aan haysan si jiid phone ama riix badhanka ah ka dhigan tallaabo weyn oo horay loo internetka ee Waxyaabaha. daarida, beddelo, bedesheen wax off iyo rasaas kor joogtada qalabaynta via cod dareensan dabiiciga ah iyo qanco: waxaa jira waxba arrin sida heleyna galay qol iyo amarkiisa nalalka si shid.
Alexa ma aha arrin ku xigeenka oo dhan-guulaysanaya cod u ballan qaaday in ay weli, laakiin Dot helo shaqo sameeyey wax jid kale awood.
Iidooyinka: soo diyaariyeen codbaahiyaha fiican ka dhigan tahay in had iyo jeer aad maqli karo, yar laakiin cod weyn ku filan in si cad loo maqlay, taageero qalab weyn, carrab cad, jirsado aad jir Hi-Fi galay smart a, Gudoomiyaha cod-gacanta, gacanta cod qalabka IoT
Arrrimaha: runtii u baahan yahay in lagugu xiro afhayeenka u ah music, ma had iyo jeer ka jawaabi kartaa su'aasha, had iyo jeer-dhageysto wax gurigaaga, ma taageeri jadwalka user badan ama macluumaadka shakhsiyeed, mid Spotify ama Amazon kaliya account music lala karaa wax hal mar
dib u eegis Samsung SmartThings Hub: Internet ah Waxyaabaha ay iyaga oo dhan ku xukumi?
dib u eegis Withings Body wadnaha: qolfo horyalka for obsessives caafimaadka
Nest Learning kulka saddexaad-gen: garaadlaawaha, qalab kuleylka wax ku ool ah
Harmony Logitech Elite dib u eegis: fududahay in la isticmaalo fog in leyliya gurigaaga
Robot jeestay carruurta Japanese galay calligraphers
Sony Xperia Z1 Mini inuu ciyaaro qaab HD 4.3in, A ...
Peter	Nov 30, 2016	Amazon.com, Qodobka, Qalab, Internet, Internet ee wax, Dib u eegida, Samuel Gibbs, Technology, UK Technology, Voice aqoonsi	Post navigation
← Waa kuwee Windows Laptop beddel kari Pro MacBook a?
TranslationEnglishAfrikaansShqipالعربيةՀայերենazərbaycan diliEuskaraБеларускаяবাংলাbosanski jezikБългарскиCatalàBinisaya中文(简体)中文(漢字)HrvatskiČeštinaDanskNederlandsEsperantoEesti keelSuomiFrançaisGalegoქართულიDeutschΕλληνικάગુજરાતીKreyòl ayisyenHarshen HausaHmoobHmoob Dawעבריתहिन्दी; हिंदीMagyarÍslenskaAsụsụ IgboBahasa IndonesiaGaeilgeItaliano日本語basa Jawaಕನ್ನಡភាសាខ្មែរ한국어ພາສາລາວLatīnaLatviešu valodaLietuvių kalbaмакедонски јазикBahasa MelayuMaltiTe Reo MāoriमराठीМонголनेपालीNorskپارسیPolskiPortuguêsਪੰਜਾਬੀRomânăРусскийCрпски језикSlovenčinaSlovenščinaAf-SoomaaliEspañolKiswahiliSvenskaTagalogதமிழ்తెలుగుภาษาไทยTürkçeУкраїнськаاردوTiếng ViệtCymraegייִדישèdè YorùbáisiZuluChinyanjaҚазақ тіліMalagasy fitenyമലയാളംမြန်မာစာSesothoසිංහලBasa SundaТоҷикӣOʻzbek tiliDhig sida luqadda default Edit TranslationUs Raac
33130	Cabidda Coffee hoos u dhigi kartaa Khatarta ismiidaaminta!
26462	5 Ways in ay u iftiimin Up Your hurdada
32929	Wolves’ Bey Lagu ID'd karaan kombiyuutarka
30126	Apple ee dahab iPhone 5s ayaa weli waxa ay barbaro galeen safaf dhaa ee London
27781	Heshiisyada Best!	Recent Articles	Amazon Fire 7 Review Tablet
Jun 23, 2017	Nokia 3310 Review: Qarax ka hore ka
May 21, 2017	Sida loo baxso ee Spies Online
May 14, 2017	Amazon Dabka TV eekoow Review: cheap, TV Great Streaming Device
Apr 15, 2017	Samsung Galaxy S8 iyo S8 + bandhigay la 'soo bandhigay xad la'aan’
Apr 1, 2017	© 2017 Copyright Newsrule.com	Pin It on Pinterest